यौन हिंसाको सन्त्रासले होस् या विभेदले नारीहरु अझै आफुलाई सुरक्षित महशुस गर्न सकिरहेका छैनन् ः आप्mनै परिवार, समाज र राज्यमा । तर, हाम्रो विडम्बना एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यौन र यौनिकताका विषयमा हार्दिकताका साथ हाम्रो परिवार, समाज र राज्य खुल्न नसक्नु एकातिर छ भने अर्कोतिर राज्य आफैं चोर र पुलिसको दोहोरो भूमिकामा देखिँदा नजानिदो तवरले मौलाएको वेश्याबृत्तिको पहाड कहाली लाग्दो बन्दैछ । सतहमा देखिएका सेक्सुयल प्रस्टिट्युडहरु त परिणाम मात्र हुन् । देश राजनैतिक, धार्मिक, बौद्धिक वेश्याहरुको चंगुलमा निस्सासिरहेको छ यतिखेर । जो सत्ताका निम्ति राष्ट्रियता बेच्छन्, जनताको रगत पसिनामाथि ठट्टा गर्छन् । जो भौतिक सुखका निम्ति आप्mनो आस्था र आत्मा बेच्छन्, अनि आफु अनुकूल शास्त्रको व्याख्या गर्दै विजनेस चलाउँछन् । जो बौद्धिकताको आवरणमा कालोलाई सेतो प्रमाणित गर्न उद्दत छन् । यसैको परिणाम ः समिक्षाहरु र विक्रमहरु जन्मिरहन बाध्य छन् । जति हामी साइकोलोजी खाइरहन्छौं र मान्छे हुनुको अर्थ बिर्सेर कलिका छायाँहरु उग्राइरहन्छौं–उति मनहरु, सम्बन्धहरु र सभ्यताहरु छिद्र बन्दै गईरहेका छन् । अतः परिवार, समाज र राज्यले सही ढंगले आप्mनो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा जुन जटिल समय भोग्नु परेको छ । यसैको एउटा पोष्टमार्टम हो – छिद्र क्यानभास ।
भोगाईले मानिसलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । सोचले दृष्टिकोण बनाउँछ । दृष्टिकोणले सिद्धान्त अनि आदर्श । जो समय अहिले हामी भोगीरहेका छौं, देशले भोगिरहेको छ । यो वास्तवमै जटिल समय हो । तर अफसोच हामी विचारशून्य छौं, भावशून्य छौं । कहिलेकाही लाग्छ–देश रत्नपार्क, सुन्धारा र ठमेलको छेऊछाऊ असरल्ल डुलिरहेका छन्, ओठमा कृत्रिम मुस्कान टाँसेर, छातीमा पीडा, चित्कार र ऐंठनका छिद्रहरु बोकेर नगरबधुको भेषमा । तर त्यही नगरबधु जसलाई भोगेर जुन दुनियाँ आप्mनो कुण्ठा मेटाउँछन्, तिनीहरुकै दृष्टिकोण किन सभ्य र शालिन हुन सकेन ? कुनै ग्रहबाट आयातित होइन उनीहरु ; यही परिवार, समाज र राज्यको सोच र व्यवहारको परिणाम हुन भन्ने लाग्छ । आप्mनो शरीर लिलामी गर्ने नगरबधुहरुभन्दा आप्mना स्वार्थका लागि देश, आस्था र मानवतालाई नै लिलामीमा राख्ने राजनीतिज्ञ, धर्म गुरु र बौद्धिक वर्ग झन् भयानक छैनन् र ? यसैको खोजीमा जन्मेको नाटक हो–छिद्र क्यानभास । नाटक नगरबधुको कथालाई केन्द्रमा राखी अघि बढाएको छु । नाटकलाई मञ्चमा ल्याउन प्रक्रियाहरु अघि बढाईराख्दा नगरबधुको कथा भन्ने बित्तिकै मानिसहरु कसरी सोच्दा रै’छन् भन्ने नजिकबाट अनुभूत गर्ने मौका पाएँ । हुन त ३ वर्ष अघि नै लेखन सके पनि मञ्चनमा भने अहिले बल्ल उतारेको छु । यो नाटकलाई मञ्चमा ल्याउन मञ्च र नेपथ्यमा रहेर साथ दिने मेरा रंगकर्मी साथीहरु तथा भाइबहिनीहरु लगायत मेरा सम्पूर्ण हितैषी मित्रहरु, अग्रजहरु र दृश्यअदृश्य सहयोगी हातहरुमा हार्दिक कृतज्ञता नजनाई रहन सक्दिन । उहाँहरुकै साथ, सद्भाव र कडा मिहेनतले आज यस नाटकलाई मञ्चमा उतार्न सम्भव भएको छ । अन्त्यमा, यस नाटकलाई साथ दिन आउनुभएका हाम्रा आदरणीय यहाँहरुलाई विशेष धन्यवाद । यहाँहरुको प्रतिक्रियाको अपेक्षा ।
मञ्चमा राम केएसी महावीर विश्वकर्मा अंकित खड्का नेहा पोखरेल राजिन श्री आचार्य सिमन खड्का प्रिया पाण्डे सीता राना विनिता थापा शंकर पराजुली प्रभास लिम्बु केशवप्रसाद रिजाल अस्मिता तिमल्सिना नेपथ्यमा भेषभुषा : भिनमाया मानन्धर सहयोगी : पूर्णिका रेग्मी/अमृता खनाल सेट डिजाइन : घनश्याम श्रेष्ठ/टिकाभक्त सेट निर्माण : डम्बर ब. भण्डारी, सुरेश कार्की, रामशरण रेग्मी संगीत एरेन्ज : विनोद कुमार भुजेल स्वर : सिता सिंक लिम्बु कोरश : विद्या तिवारी पाश्र्व संगीत : शिवप्रसाद अधिकारी कोरियोग्राफी : सुष्मा कोइराला कविता वाचन : शकु शाह लाइट डिजाइन : राम केएसी आवरण सज्जा : दिलिप राई पिआर तथा डकुमेन्टेसन : एना देउजा सहयोगी : शिक्षा केसी/कुमार सिम्खडा बक्स अफिस : शिवशंकर भण्डारी रंग संयोजन : पूर्खाजित राई लेखन/संगीत/निर्देशन : टिकाभक्त जिरेल